Zvirimwa vs. Zombies dzepakutanga dzinonyangarika kubva kuApp Store | IPhone nhau
Iyo yekutanga Zvirimwa vs. Zombies inonyangarika kubva kuApp Store
Pandakatenga yangu yekutanga iPhone ndakaona kuti paive nemitambo yakawanda yemhando yepamusoro muApp Store. Dambudziko nemazhinji emitambo iyi nderekuti ivo vakapa kana akaomesesa maitirwo ekubata masikirini kana ivo vakarerutswa zvakawandisa (senge muFIFA), asi paivewo nemimwe mitambo inonakidza kwazvo uye inopindwa muropa iyo yaigona kutambiswa zvakakwana isina kubata zvishoma chidzitiro. Ndozvazviri nemitambo yakaita Plants vs. Zombies.
Chii chatinogona kutaura nezvemutambo wakakurumbira zvakadaro? Zvakanaka, ndeimwe yeanodiwa chero emushandisi uye kuti, kanenge mutambo wekutanga, waigara uine nyeredzi shanu muApp Store, kunyangwe iri mutambo wakabhadharwa. Zvinotaridza kuti zvekupedzisira ndizvo izvo musimudziri wayo, PopCap, anga achida kuchinja uye ane akabvisa mutambo wekutanga kubva kuApple App Store. Asi iyo chete yakabhadharwa vhezheni yakanyangarika; iyo "Yemahara" vhezheni ichiripo.
Hatichakwanise kurodha Zvirimwa vs. Zombies dzepakutanga
Chii chiri chikonzero chekubviswa uku? Zvakanaka panguva ino tinogona kungofungidzira asi, kana tikazvitarisa izvo iyo "Yemahara" vhezheni ichiripo ne-in-app kutenga uye Zvirimwa vs. Zombies 2, tinogona kufunga kuti PopCap yakabudirira kuvhura yemahara mutambo nekutenga-mukati-app, kureva kuti, vanowana mari yakawanda ne "Freemium" mutambo pane nemutambo wakabhadharwa, saka ivo chete vangadai vakasiya muApp Store. iyo mitambo iyo yavanotarisira kuwana mamwe mabhenefiti.
Sechokwadi chinoda kuziva, Zvirimwa vs. Zombies dzepakutanga uye dzakabhadharwa ichiri kuwanikwa paGoogle Play. Tinogona kufungidzira pane izvi zvakare, asi vashandisi veIOS vanozivikanwa kushandisa mari yakawanda pane maapplication pane vashandisi veApple uye vanobiridzira zvishoma. Icho chingave chiri chikonzero nei, mune ino kesi, PopCap yabvisa mutambo kwatiri, kuti isu tirambe tichivabhadhara. Ini zvangu, vanomirira vakagara.
Zvirimwa vs. Zombies ™vakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Iyo yekutanga Zvirimwa vs. Zombies inonyangarika kubva kuApp Store
Arkaitz Mediavilla Urrutia akadaro
Kana iwe wakazvitenga mune chakatengwa kurodha chikamu, urikutsvaga icho, chichaonekwa uye chikuregedze utore.
Pindura Arkaitz Mediavilla Urrutia
Iwe murume, zvingave zvakanaka kana iwe wakazvitenga kare, zvaisazokutendera kuti utore. Nekudaro, sezvausingazive, chero munhu asina iyo yakachengetedzwa paPC ave kutopedza nguva zvingangoitika.
Kune rimwe divi, ndinobvumirana zvachose naPablo. Mune mawonero angu, uyu mutambo usingafi usingatombofaniri kunyangarika kubva kune chero chitoro cheapp. Uyezve, inofanirwa kuvandudzwa kuti ienderane zvizere neshanduro dzinotevera dzese iOS neApple, asi iwe unotoziva, iro ganda iganda uye ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei hupombwe huripo uye hucharamba huripo.
Zvinonyadzisa !!! Iyo freemium modhi, ini handibhadhara chero chinhu zvachose, kana ndichida mutambo uye zvinodhura € 6 kana € 8 ini ndakagadzirira kuibhadhara, zvese zvakabiwa nemari dzisingasviki chero kupi .. Ini ndinozvibaya uye isu tese tinofanira , seizvi kana uchiona kuti vanhu havatenge chero chinhu mune freemium modes .. Vanozoburitsa yakabhadharwa mitambo nemitambo mumamiriro, kwete marara anoita kuti iwe ubhadhare zviuru zve €. Vanhu vanonyatsoshandisa mari pane izvi here?
Pakangobuda iyo jailbreak inobuda .. ini ndichaisa ese hacks aripo